Nitondra fampiofanana ho an’ny Didec Toamasina ny Cnaps - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Ny diosezin’i Toamasina no diosezy faha-14 nahazo fampiofanana avy amin’ny iraky ny Cnaps miaraka amin’ny Dinec (Direction nationale de l’éducation catholique). Ireo talen-tsekoly no nisitraka ny fampiofanana tahaka izao. Nanomboka ny talata 3 mey ny atrikasa fanofana ireo mpitantana sekoly ary nifarana ny zoma 6 mey 2016 izany. Araka ny fifanarahan’ny Cnaps sy ny Dinec Ny tanjona dia ny hanomezana fiahiana ara-tsosialy ireo mpampianatra amin’ny sekoly katolika. Ilaina fanentanana izany ary koa fampahafantarana fa adidy sy zo ny fidirana Cnaps. Azo lazaina fa tsy safidy.
Ny mahery tsy maody tsy ela velona. Ny fahatsapana izany ary koa ny fahafantarana fa ny fahaizana tsisy fitandremana dia zava-poana no mahatonga ny mpitantana ny sekoly katolika miezaka manaja ny fitsipika aman-dalàna. Nanaiky ny fanofanana nomen’ny Cnaps ireo mpitantanana sekoly momba ny lalàna mifehy ny asa sy ny Lalànan’ny Fiahiana ara-tsosialy.,
“Nanomboka tamin’ny taona 2015 ny fiaraha-miasa teo amin’ny Dinec sy ny Cnaps” hoy Rabenandrasana Alfred, mpanofana eo anivon’ny Dinec. Tanjona ny hampahafantarana ireo mpitantana ny sekoly ny lalàna, ka rehefa mahalala izy ireo dia hampihatra izany mba ho tombotsoan’ireo mpampianatra mpanabe. Tsy hisy intsony mpanabe ho very zo eo anivon’ny fampianarana katolika.
Ny 2 andro voalohany tamin’ny atrikasa dia natokana hanofanan’ireo lehiben’ny sampandraharahan’ny Cnaps sy ny toniam-pitantanana avy eo anivon’ny Cnaps izay notarihin’i Rasoanaivo Didier talen’ny fenitra sy ny fikarohana Cnaps. Ny 2 andro faharoa manaraka kosa natokan’ny fampianarana katolika hikarohana vahaolana manoloana ny zava-misy iainanana eo anivon’ny diosezy Toamasina ary indrindra hijerena manokana ireo sekoly any amin’ny tontolo ambanivohitra.
Nivoitra nandritra ny fiofanana fa dieny tanora am-perin’asa dia mila omanina ny fisotroan-dronono. Vao miditra miasa ny mpiasa iray dia tsy maintsy ampidirina Cnaps araka ny lalàna velona, mba hahafahany migoka ny zo sy hahazoany ny tombontsoa amin’ny fiahiana ara-tsosialy. “Tsapa nandritra ny fiofananana fa maro ny tombontsoa azo amin’ny Cnaps” hoy masera Armelle mpitantana ny sekoly Saint Jean any Brickaville. Isan’ny tombontsoa azo ny fanampiana ny fianakaviana, ny fanampiana raha marary na tra-doza vokatry ny asa ary ny fisotroan-dronono. “Tena nilaina ny fiofanana tahaka izao” hoy masera Armelle ary nanentana ny mpampiasa ny tenany mba hitsinjo sy hijery ny zon’ny mpampianatra amin’ny fampidirana azy ireny ho mpikambana Cnaps ary ihany koa hanefa ny latsakemboka mifandraika amin’izany.
“Ankoatry ny fanabeazana eo amin’ny Fiangonana katolika dia misokatra amin’ny fiaraha-miasa amin’ny fanabeazana rehetra sy ny orinasa samihafa” ny Cnaps hoy Randrianarijaona Charles Emilson isan’ireo mpampiofana ary lehiben’ny sampan-draharahan’ny SASS (Service d’Actions Sanitaires et Sociales).
Diosezy hafa indray no hisitraka ny fampiofanana tahaka izao andiany faha-14 izao.